Andefasana raikipohy fa e e e ! Fa angaha ianao tsy hoe hiditra amin’ity revy ity indray ee ? Fa lasa aiza daholo ilay kozinao taloha ireny ee ! Na inon-kidona na inon-kihatra dia tsy maintsy hilatsaka aho ee ! Na tsy fantatra aza ny daty dia efa isany aho ee ! Hay tokoa moa ianao isan’ny nitsipaka ny hanaovan’azy ity mialoha indray koa ! Fa na izany aza ee ! Ny akamanao rehetra ireo mbola mijoro fa ianao tsy hita. Tena malahelo anao mafy mihitsy anie izahay ry Jean ee ! Ha ha ha.. !! Sao dia mba naninonaninona any ary iny Jean iny hoy ry lerony. Sao dia namoifo, sanatria ? Fantatro anefa aloha fa tsy izany ee ! Mbola henoko maneno ilay finday dia efa nilamina ny saiko. Io ihany anie ilay efa nahavoa anareo hatramin’izay ry Jean ee ! Dia mbola hanamarin-tena fa tsy mersenera ihany ve ?